Al-Qacida oo Digniin udirtay Dowlada Myanmar kadib dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu laayay dalkaa, | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Al-Qacida oo Digniin udirtay Dowlada Myanmar kadib dadkii Muslimiinta ahaa ee lagu laayay dalkaa,
Arbaco, September,13, 2017(HNN)Al-Qacida ayaa ku baaqay taageero loo fidiyo muslimiinta Rohingya ee dalka Myanmar, kuwaas oo wajahaya olole amni oo qasbay in 400,000 oo ayaga ka mid ah ay u qaxaan dalka Bangladesh madaaba arintaan ay tahay mid aan ladaawan karin.
Al-Qacida waxa ay sidoo kale ka digeen in Myanmar ay wajihi doonaan “ciqaabta dambiyada ay galayaan.”
Bayaan ay soo saartay ayay Al-Qacida ugu baaqday dhammaan muslimiinta dunida inay walaalahooda kale ee muslimiinta Myanmar ku taageeraan gargaar, hub iyo taageero milatari oo ay ku garab istaagayaan dadka Muslimiinta ah ee dhibaatada xoogaan soo gaartay waxaa ay sheegeen in arintaan ay cashar lama iloobaan ah uu ka dhaxli doono dalka Myanmar.
“Dhaqanka rabshadda wata ee ka dhanka ah walaalaha muslimiinta ah ma noqon doono mid la illaawi ciqaab la’aan” ayaa lagu yiri bayaanka Al-Qacida
“Dowladda Myanmar waxay dhadhami doontaa waxa ay walaalaheena muslimiinta dhadhamiyeensi ay unoqoto mid ay dalal badan oo dunida ay ku quustaan una dhicin in dad Muslimiinta ee kunool dalalka Dunida ee looga tiro badan yahay”.
Dowladda Myanmar ayaa ku dooday in ciidamadeeda ay wadaan olole sharci oo ka dhan ah wax ay ugu yeertay kooxo argagixiso ah xili ay ciidamadu leeynayaan dad rayid arintaan ayaa noqotay mid siweyn dunida looga argagaxo dhacdadaan ugubkaa ee sababtay in ay dad badan ku dhintaan,ku dhaawacmaan halka tiro badan kalana ay ku barakaceen.
Cabdijamal Macalim Axmed,